Garoowe : Gudiga la dagalanka Cudurka HIV/AIDSka ee Puntland PAC oo bilowday olole bulshada lagaga baarayo Cudurka. | Sahan radio
Garoowe : Gudiga la dagalanka Cudurka HIV/AIDSka ee Puntland PAC oo bilowday olole bulshada lagaga baarayo Cudurka.
Garoowe (SR): Ololahaan oo ka mid ah howlmaalmeedka Hay,adda ayaa lagu sheegay in looga golleyahay sidii loo dardargelin lahaa wacyiga bulshada eek u adan ka hortagga cudurkan iyo Virusyada keena ,waxaana laga bilabay nidaamka barista Xarumaha dowladda iyadoo laga qadayey dhiig shaqaalaha wasaaradaha iyo hay,adaha kale ee dowladda oo ay ugu horeyaan Wasiiradu.
Agaasimaha PAC Dr, Cabdiraxmaan Siciid Maxamuud ayaa ujeedka iyo ahmiyadda ku sheegay maruu warfidiyeenka la hadlayey in ay bulshada laga baaridoono cudurka oo cabsi badan looga qabo inuu ku faafo ummadda iyadoo uu xusay in xogta la hayaa ay sheegayso in garaafku sare u socdo. “Maadaama aan la ogaankarin in qofku qabo Viruska HIV ilaa la baaro waxey hey,addu hoosta ka xariiqday in la qaado tallaabadan, oo muhiin u ah siyaabaha loola dagaalamo fiddida Viruskan,waxaana aanu ka bilowney qorshahan Wasaaradda Aminga oo uu ka socdo shir balaadhan oo Masuuliyiinta wasaaradda ee Goboladuna ay ku sugan yihiin, sidaas ayaanan u wadi doonaa qorshahan iyadoo aanu ka baaridoono dhamaan bulshada deegaanka oo idil”,Dr,Dhagaweyne
Sidoo kale waxa uu Agaasimuhu sheegey in ay barista ka bilabeen shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda Amniga oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradi Khaliif Ciise Mudan ayna dhamaantood yihiin kuwo Caafimaad qaba baaris ka ka dib.
Wasiirka Amniga oo ayaa si weyn u soo dhaweeyey qorshan hey,adda ka dib markii uu dhageystey warbixino ay ka bixiyeen hoolka shirka uu ka socdey saraakiil ka socota hey’adda PAC iyo kuwa qaramada Midoobey ,waxaanu wasiirku ku dhawaaqey in uu si mutadawacnimo ah u bilaabayo is barista,Markii uu dhamaadey baaritaanku ayuu wasiirku ka waramey dareenkiisa waxaana uu yiri.
“Anigoo si gaara ugu mahad Celina Agaasimaha Hey’adda qorshahan waan taageereynaa hadaan nahey wasaaradda Amniga, waxaana farxad weyn ah in dhamaan Agaasimayaasha iyo shaqaalihii la baarey oo aan ugu horeeyo aniga Khaliifa ah in dhamaan aanu wada caafimaad qabno” wasiirka Amniga Puntland.
Sidoo kale wasiirka Arrimaha Guddaha Gen, Cabdulaahi Axmed Jaamac (Ilko-jiir) iyo taliye ku xigeenka Ciidanka Gen: Deyr Cabdi Iskatoos oo hawl shaqo u yimid Xarunta wasaaradda Amniga ayaa ka qeyb qaatey hawsha baadhitaanka ee ay hey’addu ka wadey oo iyaguna ka faa,iideystey fursadaasi.
“Aad ayaan ugu faraxsanahey in aan Caafimaadkeyga ogaado waxaana dhamaan shacabka Puntland ugu baaqayaa in ay caafimaadkooda ogaadaan oo ay ka qeyb qaataan la dagaalanka halista Viruska”Gen,Ilko-jiir.
Agaasimaha PAC Waxa uu shaaca ka qaaday in hanaanka baaritaanku uu soconayo iyadoo bulshada lagu wacyigelinayo in ay isbaraan si ay u xaqiijiyaan Caafimaadkooda guud ahaan gaar ahaan Cudurka HIV/AIDSKA iyo Viruska keena,waxaana talabaan soo dhaweyey howlwadeenadda Hay,adaha bahwadaagta la ah PAC iyo Waxgaradka deegaanadda Puntland.